China Art ebhekene aluminium ipuleti ifektri kanye nabaphakeli | I-Jixiang
Iphaneli lobuciko elibhekene ne-aluminium-plastic linezici zesisindo esincane, i-plasticity eqinile, ukwehluka kombala, izakhiwo ezivelele zomzimba, ukumelana nesimo sezulu, ukugcinwa okulula njalonjalo. Ukusebenza okuphezulu kwebhodi lebhodi nokukhethwa kombala okunothile kungasekela izidingo zabaqambi ezingeni eliphezulu, ukuze bakwazi ukusebenzisa imibono yabo emnandi ngendlela engcono kakhulu.
Ukusebenza okuphawulekayo kwendawo yobuciko obhekene nephaneli ye-aluminium-plastic kuyenza isebenzele amabhizinisi amaningi omhlaba wonke, futhi kunconywa kakhulu futhi kuthandwa yizindiza, imoto, ibhange, ukuphepha, uphethiloli, amandla kagesi, ukuxhumana, ihhotela, ingcebo, umuthi , i-electronics, njll.
Indawo yokufaka umkhiqizo:
Uhlelo lokuhlonza umkhakha - ubuciko beplastiki ye-aluminium yokuhlobisa ingaba umsizi ophelele wamabhizinisi nezikhungo ukugqamisa isithombe somkhiqizo, namandla ayo, ukuqina nezici zokulungisa ezilula kungonga ngempumelelo ukutshalwa kwezimali kuzindleko zezomnotho.
Indawo yokuthengisa yesikhungo sokugcina - isithombe senkonzo yokuthengisa yokugcina asigcini nje ngokusebenziseka, kepha futhi sithinta ngqo ukuthi abathengi bangazamukela yini izimpahla nezinsizakalo ekugcineni. Iphaneli yokuhlobisa i-aluminium-plastic yobuciko ingenza imikhiqizo yakho ikhange ngokwengeziwe.
Uhlelo lokuqondisa umphakathi lwasemadolobheni - iphaneli yokuhlobisa i-aluminium-plastic inezinzuzo ezisobala ekusetshenzisweni kwangaphandle. Ukumelana kwayo okuvelele kwesimo sezulu, ukunakekelwa okulula, izakhiwo zemishini nezinye izinzuzo kungasetshenziswa kabanzi kwizimpawu zokuphepha kwezimoto zasemadolobheni, amaphoyisa omphakathi, ukuvimbela ubhadane kanye nezimo eziphuthumayo nezinye izindlela zokuqondisa umphakathi.
Khombisa ukuhlobisa imvelo ukukhethwa nokusetshenziswa kwezinto zokwakha kudlala indima ebonakalayo ekusekeleni indawo yombukiso yokudala. Iphaneli yobuciko yokuhlobisa i-aluminium-plastic isekela ukucabanga komklami ukuqinisekisa ikhwalithi nokuhlangabezana nezidingo zakho zobuhle.
Langaphambilini I-anti-bacterial and antistatic aluminium ipuleti lepulasitiki
Olandelayo: Ipuleti lepulasitiki le-aluminium elingenamlilo